पति बितेको ३ दिन नबित्दै बिना मगरको यस्तो खुलाशा सार्वजनिक ! कंचनपुरमा हङ्गामा – नेपाली सूर्य
November 23, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on पति बितेको ३ दिन नबित्दै बिना मगरको यस्तो खुलाशा सार्वजनिक ! कंचनपुरमा हङ्गामा
काठमाडौँ, मंसिर 7
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले आफू प्रचण्डकी बुहारी हैन भन्दै स्टेज चढ्दा सबै अचम्वित परे । चुनावी सभामा कञ्चनपुरको सभा स्टेजमा उनले जब शब्द थप्न थालिन् म प्रचण्डकी बुहारीभन्दा पहिला कञ्चनपुरको छोरीका रुपमा चिनिन चाहेकी छु । यति बोलिनसक्दै तालिका गड्गडाहट सुरु भए । धेरैका खुशीले आँशु रसाए । ‘मलाई कञ्चनपुरकी छोरीका रुपमा चिनिन मन छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी निर्वाचनमा कञ्चनपुरका आमाबुबा दाजुभाईले मतदान गरेर कञ्चनपुरकी छोरीलाई संसद र सिंहदरवारमा पु¥याउँदैछन् ।’
साभार : sandeshpost